Global Voices teny Malagasy » Ghana: Nahitana tolo-kevitra mahaliana ny fanitsiana ny lalàmpanorenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Oktobra 2018 5:37 GMT 1	 · Mpanoratra L. Abena Annan Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Mainty, Ghana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Tamin'ny taona 2008, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena, nampanantena ny Ghaneana ireo kandidà fa handinika ny lalampanorenan'ny firenena. Ny fikasan'ireo mpifaninana hampiditra ny Ghaneana ao anatin'ny dingana fandinihana no nahatonga ity fampanantenana ity ho manintona kokoa – anisan'izany ny filoha John Atta Mills . Toa nanatanteraka ity fampanantenana ity ny filoha, ary feno adihevitra mahaliana ankehitriny ireo tolo-kevitra vaovao.
Ao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny Ghana Pundit  mitondra ny lohateny hoe, “Aza manitatra ny Fe-potoam-piasan'ny filoha”  nanamarika ny profesora Kofi Quashigah, sojabe ao amin'ny Oniversite Ghana hoe:
Lava loatra ny rafitra efa-taona indroa raha hanomezana olona iray voafidy ho filoha, noho ny fiantraikany amin'ireo andrim-panjakana demokratika. Ny fe-potoana dimy taona indroa kosa no fanombohana amin'ny famoronana andriamanitra. Izany no fanamafisana ny rafitra fitantanana izay tokony hisarika ny saintsika mba tsy hahatonga ny olona ho lasa singa manjakazaka … toa ampy ny fe-potoana efa-taona mba hisorohana ny olona tsy hijanona ela loatra ary ho lasa tsy milefitra.
Ity fanehoan-kevitra ity dia valin'ny iray tamin'ireo tolo-kevitra fanovana lalàm-panorenana isan-karazany izay dinihan'ny komity misahana ny fandinihana ny Lalàm-panorenan'i Ghana: manitatra ny fe-potoam-piasan'ny filoha efa-taona ankehitriny ho dimy taona.
Quashigah manampy hoe:
Tokony hotazonina ny toe-javatra tsy miova mba hisorohana ny maha-tsy maintsy ilaina ny olona izay lasa filoha.
Ary ahoana no ataon'ny Filoha Atta Mills amin'ny fampanantenany hampiditra ny vahoaka amin'ny fizotran'ny fanavaozana? Noraisin'ny Ghaneana ve io hevitra io?
Ghana Pundit nitatitra tamin'ny lahatsoratra 11 Febroary hoe:
Nisy mpahay lalàna nanoro hevitra fa ny fanitsiana ny lalàm-panorenana dia tokony hiantoka fa mitoetra eo am-pela-tanan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny andrim-panjakana sy rafitra tsara petraka ao an-toerana ary rafitra antenimieran'ny distrika ny fahefana .
Nana Addo-Aikens, vadintany, manohy hoe:
Ny fanitsiana lalàm-panorenana, izay ilain'i Ghana amin'izao fotoana izao, dia tsy tokony ahitana karazana tsipitsipika na fanadiovana na fanindriana, fa tsy maintsy ho karazana lalàmpanorenana, izay malalaka sy mivelatra tsara mba tsy handaniana fotoana tsy fahita firy ho an'ny fanovana.
Nanampy izy avy eo hoe:
Ny fanaraha-maso sy fifandanjana arak'asa ary koa ny endrika fisaraham-pahefana azo tanterahina no olana hafa mila fandinihana be eo amin'ny komity.
Tamin'ny lahatsoratra  momba ny fanitsiana lalàm-panorenana ao amin'ny tranonkalam-baovaon'ny Inter Press Services (IPS) , Osabutey Anny nanonona ilay mpahay lalàna sady sekretera mpanatanteraka ao amin'ny Vaomiera, Dr. Raymond Atuguba, ary nilaza hoe:
Hodinihana amim-pitandremana ny fanangonan-tsonia rehetra eo anoloan'ny vaomiera. Tena marina ireo olana nolazaina.
Anny mitatitra hoe:
Samihafa ireo fanangonan-tsonia voaray hatramin'izao ary ahitana fitakiana fanitsiana ny fahefan'ny mpanatanteraka.
Araka ny filazan'i Anny, nanamarika i Atuguba hoe,
Mampiseho ireo taratasy fanangonan-tsonia voarain'ny kaomity fa miandry fatratra ny fandinihana ny vahoaka.
Hita avy amin'ny tatitra fa maniry mafy ny handray anjara amin'ny fizotry ny demokrasia eo amin'ny firenena ny Ghaneana hatramin'ny nanombohan'ny lalàm-panorenana tamin'ny taona 1993.
Nidera ny firenena afrikana tao amin'ny lahatsorany i Anny:
Efa nandroso be ny firenena hatramin'izay. Laharana faha-fito amin'ny firenena mendrika indrindra momba ny fitantanana tsara ao amin'ny kaontinanta i Ghana, araka ny Tondro Ibrahim 2009 momba ny Fitantanana Afrikana. Norefesin'ny tondro, ankoatra ny zavatra hafa, ny famatsian'ny fanjakana ireo entana sy tolotra ilain'ny vahoaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/19/128046/
 John Atta Mills: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Atta_Mills
 “Aza manitatra ny Fe-potoam-piasan'ny filoha”: http://ghanapundit.blogspot.com/2010/02/dont-extend-presidents-tenure-prof.html
 tamin'ny lahatsoratra 11 Febroary : http://ghanapundit.blogspot.com/2010/02/constitutional-review-should-put-power.html
 tranonkalam-baovaon'ny Inter Press Services (IPS): http://www.ipsnews.net/index.asp